Bellevue Suites-Starfish Suite
I-Bellevue Suites yipropathi yokuzenzela ukutya ebekwe kwigadi yaseTropiki ebekwe kumbindi weAntigua. Le propathi ikwindawo ekhethekileyo ejonge iinduli eziluhlaza, izityalo ezishinyeneyo kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo. Iisuites zethu zikufuphi nokuthenga, ubomi basebusuku, i-mini mart, indlela yebhasi yoluntu & nokunye. I-ambience kwipatio yakho yabucala yangaphandle ibonelela ngamava okwenyani eCaribbean kwindawo enobuhlobo.
IQINISWE I-COVID NGURHULUMENTE*
Singalungiselela uvavanyo lwendawo.
I-Suite nganye inebhedi yobukhulu bokumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela. I-Loveseat kunye neseti yekofu ezinzileyo ngaphakathi kwiimvakwemini ezonwabileyo. Ipatio yangaphandle inesitulo sokuhlala esicushiweyo kunye netafile yokutyela enezitulo ezimbini eziphothiweyo. Iifestile zethu kunye neengcango zineengcongconi ukuze ulale kamnandi ngelixa usonwabela impepho yeCaribbean. Iisuite zethu zine-Wi-Fi encomekayo kwaye zixhotyiswe nge-Samsung Smart TV's yokukhangela iwebhu, iNetflix yasimahla, yohlobo olupholileyo lwangokuhlwa.
Amanzi ancedisayo apholileyo, ikhitshi kunye nephepha lokuhlambela kunye ne-bin liners zibonelelwa xa ufika. Ikhitshi lakho lixhotyiswe ngetoasta, iti kunye nezibonelelo zekofu, ifriji encinci / isikhenkcezisi kunye nesitovu segesi sestovetop. Zonke izitya kunye nezixhobo zokusika zikhethelwe ukusetyenziswa kwakho.
Inkonzo enye yogcino lwendlu yeveki neveki ngaphezulu kokuhlala ubusuku obu-7 inikezelwa sithi. Ukucoca okongeziweyo kunokucelwa ngentlawulo eyongezelelweyo. Nceda uthethe nathi ukuba unqwenela ukucwangcisa ukucoca okongeziweyo. Olu coceko luhlaziyayo lolokutshintsha iitawuli zakho zeBhafu kunye neBeach, ilinen yebhedi kunye nokuhlaziywa ngokubanzi kwe-suite. Sikubonelela ngeemveliso ezahlukeneyo zokucoca onokuzisebenzisa phakathi kokucoca.
Siyabuqonda ubunzima bokuhamba ngezinto ezingamanzi kwaye sikwabonelela ngeebhotile ezincinci ze-Shampoo kunye ne-conditioner yokuthuthuzela kwakho.
Ukurenta iimoto kunokucwangciswa. Ukubhukisha kwangaphambili kuyacetyiswa. Umyalezo wamaxabiso kunye neenkcukacha ezithe vetshe.
Amaxabiso akhethekileyo kwiihambo zesiqithi kunye nohambo lwabathengi abahlala nathi. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe. Kukho ifolda eneencwadana zokhenketho olwahlukeneyo kunye nemisebenzi kwisiqithi esinokukuvuyela ukukulungiselela. Iphakheji yolwazi eyamkelekileyo inikwa ekufikeni malunga neendawo ezingqongileyo kunye nohambo olufanelekileyo. Uqhelaniso lwethu olwamkelekileyo lukwabelana ngeenketho ezenzelwe wena kunye nokhetho olukhethekileyo.
Konke ukubhukisha ubusuku obusi-7 nangaphezulu zifumana intlanganiso encomekayo kunye nokubulisa kwisikhululo seenqwelomoya kunye nokudluliselwa kokufika kwi-Bellevue Suites.
Izithuthi zikawonke-wonke zikude nje. Nceda uqaphele ukuba inkonzo inokuba manqaphanqapha ngeeCawe nangokuhlwa. Sincoma ukuqeshwa kwemoto ukuguquguquka kunye nokuthuthuzela. Siyavuya ukuncedisa ngamalungiselelo njengoko sinonxibelelwano neenkampani ezithembekileyo.
Eyona nto ilungileyo ngendawo esikuyo yimbonakalo ye-panoramic, umoya ozolileyo, impepho yetropikhi, izityalo kunye neentaka ezingaqhelekanga. I-Bellevue Heights luluntu oluthe ngqo olubekwe kumbindi weAntigua.
Ivenkile yethu enkulu kukuhambo olufutshane olubonelela ngezona mfuno zokutya kunye nezobuqu ezisuka kwiibhaka ezintsha, iVeg & Fruits nokunye okuninzi ngeentsuku ezisi-7 ngeveki. I-Blendz - i-Smoothie Hub ikufuphi nekona ibonelela ngesidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nezinto ezithathwayo ngo-7 am ukuya ngo-5 pm. IKhemesti yethu kunye neKliniki nayo ikumgama wokuhamba. Isikhululo segesi yindawo yokulahla ilitye kwabo baqeshe iimoto.
Utyelelo lwakho kwikomkhulu lethu iSt John's kufuneka lubandakanye imarike yoluntu. Yindawo entle yokungcamla kwaye uthenge iziqholo ezitsha kunye nezalapha ekhaya, izinongo, iziqhamo kunye nemifuno ekhuliswe kwesi siqithi okanye ingeniswe kubamelwane bethu abasondeleyo eDominica naseGrenada. Kwicala labaNtanga kwikomkhulu uya kufumana i-Heritage Quay yokuThenga okungaSebenzisi kwaDuty kwiintlobo ngeentlobo zeeram, iicuba, imidiza, iisuti zokuqubha kunye nobucwebe. Ukwenzela ubumnandi basekhaya sinevenkile yeVenders ecaleni kweQuay apho uninzi lwamagcisa ethu omthonyama abeka umsebenzi wawo embonisweni, ukusuka kwiipani zentsimbi ezincinci ezenziwe ngezandla ukuya kwiihempe ezenzelwe wena. Ecaleni yiRedcliff Quay, eyona ndawo iyimbali kunye neyendalo ebonelela ngeendawo zokutyela kunye neebhari kwindawo eseyadini.
Ukuhlala kwindawo, silapha ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kwaye kumnandi. Njengabemi balapha sinombono ohlukeneyo kwezona lwandle zibalaseleyo, iindawo zokutyela, iibhari, iivenkile, imisebenzi kunye nokhenketho kwisiqithi sethu esimangalisayo. Abantu kunye nendalo zizinto esizithandayo kwaye ngokuzingca sabelane nawe ngelifa lethu. Sinikezela ngamava akhethekileyo eCaribbean ukwenza iinkumbulo ezingalibalekiyo kuhambo lwakho lweCaribbean.
Umqobo wolwimi uphelisiwe kwiMarike yaseJamani njengoko ababuki zindwendwe bethu bethetha kakuhle isiJamani.
Ukuhlala kwindawo, silapha ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kwaye kumnandi. Njengabemi balapha sinombono ohlukeneyo kwezona lwandle zibalaseleyo, iindawo zokutyela, iibhari, i…